Uncategorized Archive - Usizo lwabenza imisenenzi Ukwakha Metal Isitoreji Izinsiza kusebenza Metal Isitsha,Inqola,Pallet,Rack,Roll Isitsha Etc
2021 ikhathalogi yokulanda imishini yokulondoloza ye-Yougu
2021 ikhathalogi yokulanda imishini yokulondoloza ye-Yougu : yougu storage equipment catalog 2021 new
1. Ikhebula lensimbi eligoqekayo, ukwakheka kwesayensi nokubonakalayo, banciphise izindleko zokusebenza kwabasebenzi futhi bangezelele ukuphepha kokusebenza; isakhiwo esigoqekayo, izindleko eziphansi zokubuyisa ezingenamuntu; 2. Idizayini yokwakha ubunjiniyela be-pallet inengqondo, zonke izingxenye zikhiqizwa ngokuqondile isikhunta, imininingwane ihlanganisiwe, kanye nokubekezelelwa kwe-1mm kugcinwa; all the parts that are easily damaged and consumable are all…
1. Isitoreji sokugcina Isitoreji, eyaziwa nangokuthi yi-mesh cage yensimbi, yamukela izitayela ezidumile zomhlaba wonke. Ivolumu ngemuva kokugoqwa kuphela 1/3 wevolumu lapho behlangene. Inezinzuzo zesisindo sokukhanya, indawo encane yaphansi kanye nenhlanganisela elula. Isetshenziswa kabanzi ezikhungweni zokuhanjiswa kwe-loop evaliwe njengokusatshalaliswa kwezingxenye, imishini emincane, ukucubungula kobumba, imikhiqizo kagesi,…
1. Amashalofu eselula (emakhiyubhi yokubeka) Amashalofu eselula (emakhiyubhi yokubeka) imikhiqizo ihlukaniswe izinhlobo ezimbili: ihleliwe futhi iyachitheka. Banokucaciswa okufanayo, umthamo ohleliwe, awudingi imishini yeshalofu, futhi bakwazi ukubopha omunye komunye, Ngaleyo ndlela kwakha umthamo wesitoreji osicijeke kathathu futhi uqapheleke ukufakwa kwezimpahla eziningi. Sebenzisa ngokugcwele isikhala, isakhiwo esilula, ukusebenza okuhle okuthwele umthwalo, ukusetshenziswa okulula, safe and…
Izindawo ezengeziwe zokugcina zisebenzisa ama-5s ukuphatha ama-pallets agcina izimpahla nezimpahla. Izinkampani eziningi zisebenzise ngempumelelo ukuphathwa kwe-5s, kepha ezinye izinkampani azigcini ekuphathweni kwe-5s. Kungani isitolo sidinga ukuphathwa kwe-5s?? Okokuqala, ukuqaliswa kokuphathwa kwama-5s kungaxazulula izinkinga eziningi esigcini. Akukho doti, imishini, izinto zokwakha, namathuluzi ahlanganiswe endaweni yokugcina izinto. The…
Ngemuva kokuphinda umsebenzi, amabhizinisi abhekane nokushaywa kwama-oda futhi aveza ubunzima obuningi ekuphathweni kwempahla. Ukuntuleka kwamandla okugcina impahla nokushoda kwama-pallet kuye kwenza ukuthi izinkampani ziqale ukucabanga ngezikhundla zokuphatha. Ungakuthuthukisa kanjani ukunemba kokulethwa, ukunemba kwempahla, futhi ukusebenza kahle kwezidingo kuyinkinga izinkampani okufanele zibhekane nazo, and the loopholes in the store…
Foshan Yougu Isitoreji Equipment Co., Ltd ekhethekile ekwakheni nasekwenzeni zonke izinhlobo zeziqukathi zokugcina izinto zensimbi, yezinyoni, Pallet, Inqola, emakhiyubhi yokubeka, Pallet, njll okungumhlinzeki wesisombululo sokugcina ngokuphelele. Lo ngumkhiqizo wethu wakamuva, isitoreji sensimbi, sebenzisa ukubeka imikhiqizo esitolo. Uma unentshisekelo ngemikhiqizo yethu, you can contact us to inquire about…
Yini I-Trolley Futhi Yenzani?
I-handcart iyimoto ethwele edonswa futhi idonswe ngabasebenzi. Kukhokho wazo zonke izimoto. Ngaphandle kokuthuthuka okuqhubekayo kobuchwepheshe bokuphatha izinto kwama-trolleys, ama-trolleys asasebenza nanamuhla njengethuluzi lokusingatha okungenakubalwa. I-trolley isetshenziswa kabanzi ekukhiqizeni nasekuphileni ngoba inezindleko eziphansi, ukulungiswa okulula, ukusebenza okulula, light…
Uyini Umehluko phakathi KweShelf Wooden Neshelf Metal?
Ngokuyisisekelo, amashalofu ajwayelekile empilweni yethu yansuku zonke anamashalofu wensimbi namashalofu okhuni, ezisetshenziswa kabanzi ezimpilweni zethu. Yize asetshenziswa ezitolo ezinkulu zethu, ukusetshenziswa kwabo kuhlukile Yebo, yini umehluko othize? Amashalofu okhuni abizwa nangokuthi amashalofu aqinile enkuni namashalofu amasha. Kuyishalofu elivame ukusetshenziswa ezitolo ezinkulu zezitolo, supermarkets…
Yiziphi Izinto ezisetshenziswa kakhulu amashalofu?
Amashalofu yigama elijwayelekile eliqukethe okuqukethwe okuningi. Manje mangaki amashalofu akhona emakethe? Ngokusho kokuqukethwe, ihlukaniswe ngokulinganayo ngezinhlobo ezilandelayo: 1) Amashalofu wensimbi: Lokhu kuyizinhlobo ezithengiswa kakhulu emakethe. Ukusuka kwisitoreji kuya ezitolo ezinkulu, amashalofu wensimbi anomthamo omkhulu kakhulu wokuthengisa. The reason is that the…
Uhlobo Olunjani Lamagabha Alungele Izithelo Nemifino?
Okokuqala nje, kufanele ukhethe ngokuya ngendawo yokubonisa ishelufu. Uma kuyiflethi yesuphamakethe entsha ebekwe endaweni ephakathi nendawo, ungakhetha ishalofu elicala elinemidwebo emibili yemikhiqizo enjengezithelo nemifino. Akunandaba ukuthi ikhasimende lidlula liphi, uyakwazi ukubona imikhiqizo kumashalofu amasha, which can form a greater…
Ikhasi 1 ka 512345»